फायरफक्स फ्ल्यास ह्याक ... जस्टिन टिम्बरलेकको नयाँ गीत डाउनलोड गर्नुहोस् Martech Zone
बिहीबार, अगस्ट 10, 2006 आइतबार, अक्टोबर 15, 2006 Douglas Karr
यो मेरो राम्रा साथी बिल डसनबाट चाखलाग्दो छ। मोजिला प्रयोग गर्दै, जानुहोस् जस्टिन टिम्बरलेकको वेबसाइट.
तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ र साइट मा सेक्सी फिर्ता मा आफ्नो नयाँ गीत प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
टाइप गर्नुहोस् बारेमा: क्यास ठेगाना बारमा र तपाईंले फाइलहरू सबै देख्नुहुनेछ जुन पृष्ठले सन्दर्भ गर्दछ। दुर्भाग्यवश जस्टिनका लागि, उनका फ्ल्यास विकासकर्ताहरूले डाउनलोड गर्नका लागि सिधा हामीलाई फाइलमा डो lead्याउँछन् ... धेरै राम्ररी भेद गरीएको मैले भन्नै पर्छ!
का लागि पृष्ठ खोजी गर्नुहोस् .mp3
म अन्य धेरै साइटहरू यति बोल्न को लागी आश्चर्य छ।
PS: म जस्टिन टिम्बरलेक फ्यान होइन।
justintimberlake.com मा भएका मानिसहरूसँग हास्यको भावना छ जस्तो देखिन्छ। मैले भर्खरै ट्र्याक 2, सेक्सीब्याक, माथिको विधि प्रयोग गरेर समातें। 192kb/s mp3, पपस्टारहरूको पछिल्लो सानो क्लब डिट्टीको गुणस्तर रेकर्डिङ।
mp3 फाइलको ID3 जानकारीमा के छ यहाँ छ:
शीर्षक: यो गीत डाउनलोड नगर्नुहोस्
कलाकार: अजीब अल Yankovic
एल्बम Striagt Outta Lynwood
त्यो हास्यास्पद छ! यो अझै पनि मूर्ख छ कि तिनीहरूले त्यहाँ सबैलाई फेला पार्नको लागि बाहिर राख्दै छन्, यद्यपि। फ्ल्यासमा केही उत्कृष्ट मल्टिमिडिया सुविधाहरू छन् जुन MP3 लाई स्ट्रिम गर्न लागू गर्न सकिन्छ र यसलाई सीधा सन्दर्भ नगर्न सकिन्छ।
यदि यो तपाईं वा म भएको भए, हामी अहिले RIAA बाट आफूलाई बचाउन वकीलहरू खोज्नेछौं!
अक्टोबर 21, 2006 बिहान 7:02 बजे
केटाहरू सम्झनुहोस्, नेट सर्फ गर्ने सबैलाई वा विशेष गरी जस्टिन टिम्बरलेकको वेबसाइटलाई थाहा छैन, त्यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छ, थोरैले मात्र त्यसो गर्न सक्छन्, र mp3 फाइलहरू निःशुल्क प्राप्त गर्नुहोस्। यो ठुलो कुरा होइन!
अक्टोबर 26, 2006 बिहान 5:21 बजे
ठिक छ, मलाई त्यो भन्नको लागि पहिलो बन्न दिनुहोस् http://www.eminem.com जस्टिन टिम्बरलेकको साइट जत्तिकै खराब छ। तर कम्तिमा http://www.eminem.com डिजाइनरले mp3 को गुणस्तर 64Kb/s मा घटायो =)
जनवरी 26, 2008 1:31 बजे
यस्तो देखिन्छ कि विकासकर्ताहरूले जस्टिन टिम्बरलेक साइटमा प्वाल प्लग गरेका छन्। = (